बेलायतमा भेटियो अर्को नयाँ भाइरस, के हो मन्कीपक्स ? यो कति खतरनाक छ ? - Nepali in Australia
June 14, 2021 autherLeaveaComment on बेलायतमा भेटियो अर्को नयाँ भाइरस, के हो मन्कीपक्स ? यो कति खतरनाक छ ?
मंकीपक्स घातक नहुने पनि विज्ञहरुले बताएका छन् । ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, शरीर सुन्निनु, ब्याक पेन हुनु, मांशपेशीहरु दुख्नु यसको लक्षणहरु हुन् । सामान्य लक्षण देखिएको २ देखि ४ हप्तासम्म आफैं निको भएर जान्छ र मंकीपक्स सुरुमा सन् १९७० मा कंगोमा ९ वर्षका बालकलाई देखिएको थियो जबकी त्यहाँ १९६८ मानै स्मलपक्सको निवारण भएको घोषणा गरिएको थियो । कंगोमा देखिएपछि पछिका वर्षहरुमा ११ वटा अफ्रिकी मुलुकमा मंकीपक्सको केसहरु देखिन थाले । इताजाखबर बाट